Jaarmiyaaleen Gargaarsa Namoomaa loogii malee hojjachuu qabu jedhame
Faayilii - Hiriira baqattoota Eeritraa Itoophiyaa jiran Finfinneetti geggeessan, Adoolessa 29, 2021
Yeroo ammma haalii loogii jarmiyaalee gargaarsa namooma irratii mul’achaa jiruu rakkinaa Itiyoophiyaa waan itti dabaluu yoo ta’ee malee fala ta’uu akka hindandeenyee beektonii himan. Gabasaan VOA Masfin araagee Kan haasofsiise yunniversitii waldiyaatti sayiinsii siyaasa fi waltii dhufeenyaa adduunyaa kan barsiisan Alamuu Araagee fi Yuniiversitii Wallootii kutaa baruumsa seeraa irraa Dejen Yemaane akka jedhanitti waggootan sadan darban keessa Itiyoophiyaa keessatti bakka adda addaatii rakoowaan namoomaa garagaraa umamaniiru . warrii Gargaartotaa Aduunyaatii ofiin jedhan garuu amma xiyyeeffannaa Tigiraayiif kennan naannoo biraatiif kenna hin jiran.
Akka beektonii kun jedhanitti yeroo amma gareen TPLF naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar keessatti lola taasisaa jiruun namooni jirattotaa zoonii tokkoo caalan qe’ee isaanii irraa buqa’anii jiruu. jarii kunis gargaarsaa fi xiyyeeffannaa barbachisa jedhaniiruu beektonii kun.
Itti dabaluudhaanis yeroo ammaa garaa Tigraayit kan fe’amee deemaa jiru gargaarsaa namoomaa ituu hin ta’in dhimma siyaasaatti jedhaniiru.
Lolaa keessaa kan jiruu garee lammaa waan ta’eef jarmiyaaleen gargaarsaa garee tokkoof looguu dhiisanii loogii malee akka hojachuu qaban beekktoni kun gaafachuu isaanii gabaasin gabaasaan Masfin Arraagee radiyoo sagalee Amerikaatiif qindeesee ibseeraa.
Hoggantootaa TPLF keessaa tokko kan ta’an jeeneraal Tsaadiqaan Gabre tinsaa’ee qaawwaa ykn karaa gargaarsii itti galuu danda’u banuudhaaf jechuudhaan tibana darbe akka karaa Afaariin lola banan ibsuun isaanii hin yaadatama .
Daarikteerii gargaarsaa Amerikaa Samantaa Pawore gidduu kana Sudaan keessaa turanii waa’ee gargaarsa namoomaa irratii maryachuudhaaf Itiyoophiyaa seenaa jeran.